Ifashoni ezinzileyo: yintoni na, iimpawu kunye neengcebiso | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 20/04/2022 12:00 | Yendalo
Ii-Ecolabels zihlala zivela ngaphambili xa kuthethwa ngazo ifashoni ezinzileyo, iimpikiswano ezinxulumene nemveliso kwimizi-mveliso ekude, kodwa umzamo omkhulu wokusombulula kunye nangakumbi nangakumbi amalaphu endalo angenamveliso enetyhefu. Ngethamsanqa, le mbono iqinisekiswa kwihlabathi liphela ngenxa yokwanda kweenkampani zamazwe ngamazwe kunye noosomashishini abancinci abanika inguqu entsha kwingqikelelo yefashoni ezinzileyo.
Ngenxa yesi sizathu, siza kunikezela eli nqaku ukukuxelela yonke into oyifunayo ukuba uyazi malunga nefashoni ezinzileyo, zeziphi iimpawu zayo kunye neenzuzo.
1 Ifashoni ezinzileyo
2 Imikhwa yefashoni ezinzileyo
2.1 musa ukuthenga kakhulu
2.2 Tyala kwiimveliso zefashoni ezizinzileyo
2.3 Ungalibali ifashoni yakudala kunye neempahla ezisetyenzisiweyo
2.4 Ukurenta kwakhona lukhetho
2.5 Kuphephe ukujikeleza kwendalo
2.6 Qonda impembelelo yezinto eziphathekayo kunye namalaphu ngokwakho
2.7 Cinga ukuba ngubani owenza iimpahla ozinxibayo
2.8 Khangela iibrendi ezizinikele kwisayensi
2.9 Khangela iibrendi ezinempembelelo entle kwindalo esingqongileyo
Iziseko zemodeli yoshishino lwefashoni ezinzileyo zidlula ukugcinwa kobutyebi bendalo, impembelelo ephantsi ye-ecological yezinto ezisetyenzisiweyo (ekufuneka ikwazi ukufakwa kamva kwikhonkco lokurisayikilisha), ukuncitshiswa kwekhabhoni yonyawo kunye nentlonipho yezoqoqosho kunye nendawo yokusebenza. iimeko zabasebenzi ababandakanyekayo ukusuka kwizinto eziluhlaza ukuya kwindawo yokuthengisa.
Ishishini lefashoni sele liqhayisa ngabayili abaninzi abadumileyo, iimodeli kunye nosaziwayo abalwela ifashoni ezinzileyo. Ezi ziquka uLucy Tammam, uStella McCartney, uFrock Los Angeles, u-Amour Vert, u-Edun, uStewart+Brown, uShalom Harlow kunye no-Summer Rayne Oakes.
Ifashoni ezinzileyo ngokuthe ngcembe ifumana indawo yayo kwishishini. Kwakhona kubekho ukukhula kumbutho wokhuphiswano, iminyhadala, iiklasi, iinkqubo zokufakwa, ulwazi lobuchwephesha kwiiblogi nokunye..
Ngokomzekelo, iVeki yeFashoni yasePortland, esandul' ukugqitywa e-US, ithathe kuphela i-100 yepesenti yoyilo lwe-eco-friendly. Kwikomkhulu laseSpain, Ivenkile yeProjekthi yeSetyhula yasungulwa kulo nyaka kwinzame zokufumana indawo ekhuphisanayo neMadrid catwalk ngokunikezela ngempahla ezinzileyo. Iintsuku zeFashoni eziZinzileyo nazo zibanjelwe eMadrid iminyaka emine. EArgentina, I-Verde Textil inikezela ngeemveliso ezinefuthe lezero lokusingqongileyo kunye ne-100% yokuzibophezela kwezentlalo, ngelixa uthengisa kwi-intanethi.
Ityala elifanele ingqwalasela ekhethekileyo yi-brand ye-Heavy Eco, inkampani yokuqala yefashoni eyasungulwa kwiintolongo, ivelisa iimpahla ezizinzileyo. Ukongeza kumsebenzi wokubuyiselwa kwabaphuli-mthetho base-Estonia abangaphezu kwe-200 abaye basebenza kunye nenkampani, i-50% yeenzuzo iya kunceda abantu abangenamakhaya kunye neenkedama kwisixeko saseTallinn.
Imikhwa yefashoni ezinzileyo
musa ukuthenga kakhulu
Yeyona ndlela isebenzayo yokuphatha amakhulu amawaka ezigidi zeempahla eziveliswa ehlabathini lonke nyaka ngamnye. UHarriet Vocking, umcebisi we-arhente yeqhinga elizinzileyo i-Eco-Age, ucebisa ukuba sizibuze imibuzo emithathu ngaphambi kokuthenga iimpahla: «Sifuna ukuthenga ntoni yaye ngoba? Yintoni ngokwenene esiyifunayo? Siza kuyisebenzisa ubuncinane izihlandlo ezingamashumi amathathu ezahlukeneyo”.
Tyala kwiimveliso zefashoni ezizinzileyo
Ngoku ukuba sigqibe ukuthenga ngamehlo angaphezulu, yeyiphi indlela engcono yokuxhasa iimpawu ezizibophelele ngokucacileyo ukuba zizinzileyo. Ngokomzekelo, uCollina Strada, uChopova Lowena okanye uBode basebenzisa izinto ezisetyenzisiweyo kwizakhiwo zabo. Ikwakunceda ukuba ucoce iibrendi ezikhoyo ngokusekwe kuhlobo lwempahla abanayo kwimarike, nokuba sisinxibo esizinzileyo esinje ngeGirlfriend Collective okanye i-Indigo Luna, iimpahla zokuqubha ezifana ne-Stay Wild Swim okanye uNatasha Tonic, okanye idenim efana ne-Outland Denim okanye iRe/ Donate.
Ungalibali ifashoni yakudala kunye neempahla ezisetyenzisiweyo
Ngamaqonga afana ne-RealReal, i-Vestiaire Collective okanye i-Depop, ukuthenga imfashini ye-vintage kunye nempahla yesibini ayikaze ibe lula. Cinga ukuba awuyi kunika ingubo kuphela ithuba lesibini, kodwa uya kunceda ukunciphisa impembelelo yokusingqongileyo kwi-wardrobe yakho. Ifashoni yevintage nayo inenzuzo enkulu yokuba iingubo zayo ziyingqayizivele ngokwenene. Ukuba akunjalo, jonga indlela uRihanna okanye uBella Hadid abukeka ngayo, abalandeli abakhulu.
Ukurenta kwakhona lukhetho
Xa sinomtshato ongaqhelekanga okanye igala (ngenxa ye-COVID, ewe), ukhetho olwamkeleke ngakumbi kukurenta iimpahla zethu. Ngokomzekelo, uphando olutshanje e-UK wagqiba kwelokuba eli lizwe lithenga iimpahla ezizizigidi ezingama-50 ehlotyeni yaye linxiba kube kanye kuphela. Impembelelo, akunjalo? Akukho mathandabuzo ukuba singcono ukukhaba lo mkhwa, ngakumbi xa ucinga ukuba isekhondi nganye edlulayo ilingana nelori yokutshisa inkunkuma yelaphu (okanye iphele kwindawo yokulahla inkunkuma).
Kuphephe ukujikeleza kwendalo
Iibrendi ziye zaqaphela ukuba siya sizazi ngeenyawo zethu zendalo. Yiyo loo nto behlala bezama ukuntywila kwiimveliso ezinamabango angaqondakaliyo anokuthi alahlekise okanye abonise ngokuchanekileyo ukuzinza kweempahla zabo. Musa ukukhohliswa zizijekulo eziluhlaza kwaye ungahambi ngaphaya kwamabango "zinzile", "luhlaza", "uxanduva" okanye "ukuqonda" uya kubona kwiilebhile ezininzi. Khangela ukuba oko bakuthethayo kuyinyani na.
Qonda impembelelo yezinto eziphathekayo kunye namalaphu ngokwakho
Xa uthenga ngokuzinzileyo, kubalulekile ukuqonda ifuthe lemathiriyeli ebumba iimpahla zethu. Xa sithetha nje, umthetho jikelele olungileyo kukuphepha imicu yokwenziwa efana nepolyester (izinto esizifumana kwi-55% yempahla esiyinxibayo) kuba ukubunjwa kwayo kubandakanya amafutha efosili kwaye kuthatha iminyaka ukubola. Kufuneka kwakhona ubeke ingqalelo kwiimpahla zendalo. Umzekelo, umqhaphu owenziwe ngendalo usebenzisa amanzi amancinci (kwaye akukho zibulali zinambuzane) xa ukhuliswe kunomqhaphu oqhelekileyo.
Eyona nto sinokuyenza kukukhangela iimpahla ezinezatifikethi ezizinzileyo zokuqinisekisa ukuba amalaphu kunye nezinto ezisetyenziswayo zinempembelelo elinganiselweyo kwiplanethi: umzekelo, i-Global Organic Textile Standard yomqhaphu kunye noboya; Izatifikethi zeQela eliSebenzayo lesikhumba zesikhumba okanye i-adhesives ye-Forest Stewardship Council isatifikethi semicu yerabha.
Cinga ukuba ngubani owenza iimpahla ozinxibayo
Ukuba ubhubhane wenze nantoni na, ibikukuqaqambisa ubunzima bemihla ngemihla abasebenzi abaninzi kushishino lwamalaphu abadlula kubo. Ngoko kubalulekile ukuqinisekisa ukuba bafumana umvuzo wokuphila kwaye baneemeko ezifanelekileyo zokusebenza. Iimpawu zeTrasti ezichaza ulwazi malunga nemigaqo-nkqubo yazo yemivuzo, ukuqesha kunye neemeko zokusebenza kumzi-mveliso, naphi na apho zikhoyo.
Khangela iibrendi ezizinikele kwisayensi
Enye indlela yokuxelela ukuba inkampani inomdla wokwenyani ekunciphiseni ifuthe layo lokusingqongileyo kukubona ukuba izibophelele na kwimigangatho yenzululwazi ezinzileyo. Iibrendi ezibambelela kwiqonga leengcebiso ezisekelwe kwisayensi, kubandakanywa iBurberry okanye iKering, izigebenga zeshishini lezobunewunewu ezisemva kweGucci okanye iBottega Veneta, ziyafuneka ukuba zihambelane neSivumelwano saseParis sokunciphisa izinto ezikhutshwayo.
Khangela iibrendi ezinempembelelo entle kwindalo esingqongileyo
Iinkampani zozinzo ezifana noMara Hoffman okanye i-Sheep Inc sele zicinga malunga nendlela ezinokuba nefuthe elihle ngayo kwindalo engqongileyo ngaphezu kokunciphisa impembelelo yazo. ezolimo ezihlaziyayo, intshatsheli yobuchule bezolimo obufana nembewu ethe ngqo okanye izityalo zokugquma, ifumana inkxaso yoshishino ngakumbi kunye nenjongo ecacileyo: ukuphucula umgangatho womhlaba kunye nokukhusela i-biodiversity.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nefashoni ezinzileyo kunye nokubaluleka kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ifashoni ezinzileyo
Yintoni ipaki yesizwe